Gaari Qarax Laga soo Buuxiyay oo Xalay Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
July 24, 2016 – Ciidanka amaanka iyo kuwa Nabad sugida (NISA) ayaa shaaciyey iney magaalada Muqdisho ku soo qabteen gaari nooca Nooha-da looya qaan oo laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa.
Sarkaal ka tirsan Nabad sugida ayaa u sheegay warbaahinta in gaariga la dhigay goob ay bulshadu ku badantahay oo ka tirsan degmada Boondheere ee Gobolka Banaadir lana doonayey in halkaas lagu qarxiyo, balse la fashiliyey.
Qabashada gaarigan ayuu sarkaalku sheegay in ay ku gacan siiyeen dadka degaanka oo ku soo war-galiyay ciidamada inay ka shakiyeen gaari waddada dhinaceeda lasoo dhigay.
Ciidamada qaabilsan qaraxyada ayaa la sheegay iney furfureen qaraxyada gaariga ku xirnaa, waxaana goobtaasi laga mamnuugay dadkii doonayay inay u soo daawasho tagaan.ado.
July 24, 2016 Geesey
2 Responses to Gaari Qarax Laga soo Buuxiyay oo Xalay Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
abdinasir July 25, 2016
soomaaliyey ilahay ka cabsada umadii wey dhiban yihin dhibka kadaaya qax iyo gaajo looma adgeysan karo shacabka nabad ayey rabaansoomaaliyey ilahay u labta oo umada soomaaliyed u naxarista qofwalba oo soomaali shegta mas uul ayaa ka saran in nabada uu ka shaqeyo ilaahow umada adigaa u maqan aslaxi
shacabkii soomaaliya waad arkeysan mar sacudiga ayaa dhib u gesta marna bada ayey ku dhamaden sida loo wada dhan yahay shacabkii sooomaaliyed waad arkeysan ma sidaan ayaa xal inoo ah ma waxaa la sugayaa madaxda soomaaliyed in ay ka hadlan malin walba qof walba oo soomaali ah kalintiisa waa inuu ka qataa shacabka soomaaliyed sida lagu badbadin lahaa dhalinyarada dhigata iskulka dhibka uu le yahay tahriibka waa in loo shegaa malin dhan cashar fiican oo loogu wacyigaliyo bada dhibka ay le dahay ardeyda soomaaliyed waa in laga wacdidaa tahriibka masajidyada waa in loo kacaa umadii soomaaliyed wey dhamaden yaa u maqan yaa wax u shegaya hunguri wixii ilahay kuu qoray kaliya ayaa heleysaa in bada lagu daato xaq ma ahan waa ciil xumo yemen liibiya sudan saxaraha inta ku dhamaneysa oo soomaali u badan ma leysweydiiyey shacabka soomaaliyed waa in la soo banan baxaa oo laga hortagaa walalhena bada ku dhimanaya dowlada shacab culuma u diin waa in ay u kacaan sida loo xalin lahaa mashakilkani bada ilahow imanka na gali toowfiiqdana ilahow inoo toosi towfiiq soomaali hadeynu nahay dhamantena yar iyo weynba